३ महिने सुई र महिला स्वास्थ्य - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
म ३२ वर्षीया गृहिणी महिला हुँ । मेरी जेठी छोरी १३ वर्षकी भइन् । विगत दुई वर्षदेखि मैले तीनमहिने सुई प्रयोग गर्दै आएकी थिएँ, तर सुईले मेरो महिनावारी रोकिएपछि मैले सुई लगाइनँ । सुई छोडेको चार महिना भए पनि महिनावारी भएको छैन । अहिले आएर मलाई वाकवाक लाग्ने तथा खाना नरुच्ने भएपछि घरमै पिसाब परीक्षण गर्दा गर्भ रहेको देखियो । महिनावारी नभै गर्भ रहन सक्छ ? मेरी छोरी पनि ठूली भैसकिन् । अब मैले के गर्ने ?
परिवार नियोजनका लागि प्रयोग गरिने तीनमहिने सुई (संगिनी, डिपो) मा एक किसिमको हार्मोन प्रयोग गरिएको हुन्छ । नेपालमा प्रयोग गरिने अस्थायी साधनहरूमध्ये सबैभन्दा बढी दम्पतीले रुचाएको तीनमहिने सुईले महिलाहरूमा अण्डा उत्पादन हुन दिँदैन र त्यसैले गर्भ नरहने हुन्छ ।
यो एउटा अत्यन्त प्रभावकारी साधन पनि हो, तर यो सुई प्रयोग गर्ने महिलाहरूमा सुई छाडेको ३ देखि १० महिनासम्म महिनावारी नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्यत: गर्भ रहँदैन, तर कसै–कसैमा महिनावारी सुरु नभै पनि गर्भ रहन सक्छ । त्यसैले तपाईंको गर्भ रहेको साँचो हुन सक्छ । गर्भ रहँदैमा आत्तिनु पर्दैन ।
नेपालमा गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी अधिकार भएकाले १२ हप्तासम्मको गर्भ आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा सुचिकृत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीसंग परामर्श गरेर गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तपार्इंको उमेर ३२ वर्ष मात्र भएकाले गर्भपतनपछि फेरि गर्भ रहन सक्ने हुन्छ, त्यसैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।